Mutemo Wembira : Sekuru's Stories Mutemo Wembira : Sekuru's Stories
Mbira dzakanga dzine mutemo wakaoma. Chaive chiridzwa chemumba, chakanga chisiri chiridzwa chaibuda kunze. Chairidzirwa mumba mumasvikiro makuru. Mateze nembira, zvese zvainge zvisingadii? Usingaende nazvo kumba kwako. Maiti mukaridza, mosiya imomo mubanya macho. Mosiya imomo, mobuda mave vanhu.
Mutemo wembira unoti gwariva rembira kana deze haribatwi nemunhu abva kusununguka nhasi. Mukadzi akasununguka anofana kutoita mwedzi mitatu asati abata mbira dzake. Wechitatu odii? Otanga kuchiridza zvake mbira. Munhu anenge ari kumazuva ake anopedza svondo ndokuti abate mbira. Kwozoita, unogona kurova munhu. Munhu uyauya paunomusiya, ropa rake rikangodaukira pauri, wabata ropa. Zvakangofanana nekuuraya. Haubate mbira, nokuti mbira hadzidi zvinhu zvakaipa. Zvinoda zvinhu zvakanaka chete, zvinoda vanhu vakachena. Ndosaka dzaigara kubanya dzisingabude kunze.
Uye chatairambidzirwa kugara nadzo ndechokuti mumwe anogona kuuya – toti shamwari yangu anouya abva kuvasikana kana kuti arara nemusikana, ouya obata mbira. Akabata mbira idzodzi, akadziridza, dzinotyoka. Inini kana ndauya, ndisati ndaita chimwe chinhu ndotanga kunobata mbira dzangu – “Ndiani atyora mbira dzangu?”
Handizivi kuti zvinomboita sei. Ndinongobva kwandabva kana kubva kubasa, ndinouya. Ndosvika ndichingopinda mumba umuka, ndotanga kuenda kunobata mbira dzangu. Ndobva ndakuti ndiridze, “Ndiani atyora mbira?” “Pane nhingi auya kunoridza, saka angosiyawo, hatina kuziva kuti aita sei, angosiya aridza abva asiya achienda.”Ndosaka tisina kubvumira munhu wese wese kubata mbira, nokuti kwaanenge abva haukuzive. Saka zvinokanganisa mbira izvozvo.
Iye zvino izvi dzakubuda, nemhaka yekuti vakuru vakatiwo “Chifambai nadzo, muone zvinokuraramisai.”
Zvaiitika ndezvekuti ndikasvika ndokumbira mbira, kuti “Ndinokumbira mbira, ndoda kuenda kubira.” Ndonoridza kubira, ndodzoka, ndouya ndosiya mbira umu. Saka kunozoitawo mumwe anoda kufunda, sezvakaita iwewe wakabva kure kure, woda kufunda. Ndonodzitora uko, ndouya, kana kutokwira bhazi kuenda kumusha kunotora mbira. Ndouya, ndokudzidzisa, ndodzokera nadzo futi. Saka vakati, “Aiwa. Iye zvino izvi, takusunungurai, munogona kudii? Kugara nadzo. Magara nadzo, munofanira kuchengeta mitemo yacho. Mukachengeta mitemo yacho, unogara nadzo.”
Saka vamwe vazhinji, iye zvino izvi takungoti “Airidza mbira.” Havacharidza mbira. Zvikonzero zvacho izvozvi, nokuti unotora mbira idzodzo, unogara nadzo, asi hauchakwanisa kuchengeta mitemo yacho. Ukatadza kuchengeta mitemo yacho, dzinopera. Unosara uchiti, “Ah, ndaimboridza mbira.” Woridza, asi haucharidza zvinonzwika nevanhu, zvinopinda muhana mevanhu. Unenge wakungoridza chete, zvongoti, “Ndaigona kuridza mbira.” Hautore nguva yakareba uchiridza, nokuti wakatadza kuteverera mutemo wacho, ndobva zvaperawo. Saka zvinopera.